China agba roba mkpuchi kpochapụwo ntutu ahịhịa na imewe ala njikwa ụlọ ọrụ na-emepụta | Yongsheng
Agba roba mkpuchi kpochapụwo ntutu ahịhịa na imewe ala ahụ
Agba: Nwa, Red.… Nhazi.
MMA, T09-2151T, T09-2143T, T09-2562T
MMA, T160-2586T, T160-1765T, T160-2185T, T160-2151T
Nga-mmepụta ------ sample----- nkwenye-Ihe ịzụta-Akụrụngwa ------ akụkụ Ọgwụ-Ogo ------ nnyocha-Akụkụ ------ akụkụ - ---- elu ------ imecha-Ogo ------ nnyocha-Assembly-Quality ------ nnyocha-mbukota.
Kpochapụwo na e mere na na roba mkpuchi soft soft nnọọ mfe jide ya na ala. Emechala ntutu ntutu na ihe matte iji hụ na njide siri ike.
Ngwongwo ntutu isi na-egbuke egbuke nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche, ihe ntanye na-agbanwe agbanwe na naịlọn ma ọ bụ bristles agwakọta agaghị atụ ma ọ bụ dọpụta ntutu, nwekwara ike ịbụ ezigbo ịhịa aka n'ahụ. Ntọala a na-eme ka ọbara gbasaa na isi, na-emepụta ntutu dị mma, na-agba ume ntutu, ma na-eme ka ntutu dị na mmanụ na-aba ụba, ebe obere oghere ikuku na-egbochi nrụgide ikuku iji zere imebi isi. A ga-enwe oghere na kwushin. Ọ nwere ike ikwe ka ikuku na-ekesa ma nwee ike iji ịhịa aka dị nro karịa.
Igbapu ntutu ntutu kwesịrị ekwesị maka iji ụdị ntutu niile: nke ọma, nke dị oke ma ọ bụ na-agagharị. Ngwaahịa a kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla ma ọ na-arụ ọrụ ebube na ntutu mmiri ma ọ bụ na-enweghị nkụ. Nnukwu ntutu isi buru ibu na-adabara akụkụ ahụ.
Gburugburu ntutu isi nwere ike ịmepụta ebili mmiri dị nro ma ọ bụ curls, gbakwunye ahụ & njupụta ma ọ bụ dị mma & na-agbatị agbagọ, ntutu ma ọ bụ ntutu isi.
Nwere ike ịhọrọ agba ọ bụla maka mkpuchi roba, otu agba maka ahịhịa oghere ma ọ bụ iche iche agba maka isi na njikwa. Otu akara agba bụ n'efu. Nkịtị ngwugwu bụ na-emeghe naịlọn akpa. Ọzọkwa anyị nwere ike na-enye plastic hanga, akwụkwọ hanga, akwụkwọ kaadị, opp akpa, PET igbe na ngosi.
Osote: Wide-nha nha detangler mbo na ala ahụ
Boars Hair ahịhịa
Ọla kọpa Hair ahịhịa
Ngwongwo ntutu isi nke igwe
Obere Osisi ntutu
Ahịhịa ntutu ntutu isi
Ezi ntutu ntutu
Osisi Horse Horse ntutu